Fitateram-bahoaka Antananarivo sy ny manodidina: tsy afa-po amin’ireo mpitatitra ny 70 – 85 %-n’ny mpandeha | NewsMada
Fitateram-bahoaka Antananarivo sy ny manodidina: tsy afa-po amin’ireo mpitatitra ny 70 – 85 %-n’ny mpandeha
Mbola miantoka ny 72 %-n’ny fitaterana eto Antananarivo sy manodidina ny fitaterana an-tanety. Manana anjara toerana lehibe, noho izany, io sehatra iray io mampihodina ny toekarena. Olana goavana anefa ny iainan’ny vahoaka izany, raha ny eto an-dRenivohitra sy ny manodidina.
Ny antontanisa farany, ny taona 2017, misy fiara 3 500 miantoka ny fitateram-bahoaka eto an-dRenivohitra, ary 2 000 ny mampifandray amin’ireo kaominina manodidina. Kaoperativa ampolony maro ivondronan’ireo fiara mpitatitra ireo, samy manana ny fomba fiasany sy ny zotra iraisana. Rehefa nanaovana fanadihadiana ny hevitry ny mpandeha, 70 hatramin’ny 85 % ny milaza tsy afa-po tanteraka amin’ny fomba fiasan’ireo mpitatitra ireo. Itovian’ny maro hevitra ny faharatsian’ny tolotra: ratsy ny fiara sy ny seza; matetika tsy manaja mpandeha ny mpamily sy ny mpanampy mpamily (resevera).
Tsy mitovy avokoa anefa ny kaoperativa fa misy ahitana tolotra tsara ho an’ny mpandeha ihany. Amin’ny ankapobeny, tsy manaja bokin’andraikitra ireo mpitatitra, toy ny fiverenana an-dalana sy ny fitsaharana mialoha ny fotoana. Rehefa nisafidy hanao ny asa fitateram-bahoaka anefa, tsy tokony ho any amin’ny fitohanan’ny fifamoivoizana ny atao fialan-tsiny satria efa fantatra mialoha.
Tena sahirana, indrindra ny mponina manodidina ivelan’Antananarivo. Miasa eto an-dRenivohitra avokoa ny olona maro any amin’ireo kaominina ireo, misy ireo minisitera samihafa, ny orinasa amina sehatra isan-karazany miankina na tsy miankina, sns. Ny sekoly ambaratonga faharoa lehibe malaza, mbola eto an-dRenivohira, ny oniversite, sns. Ireo rehetra ireo, miankina betsaka amina fitaterana ny mampihodina azy. Lasa misy endrika fanararaotana ny ataon’ny mpitatitra nefa tsy manan-tsafidy ny mpandeha.
Samy matiatoka ny rehetra
Samy matiantoka avokoa na ny mpandeha na ny mpitatitra izay misy akony lehibe ao amin’ny toekarena. Ireo mpitatitra, ohatra, mandany 60 000 hatramin’ny 80 000 Ar isan’andro amin’ny vidin-tsolika fotsiny; hafa ny enjehina arotsaka ifanarahana tamin’ny tompon’ny fiara ; ny ambiny, raha misy, an’ny mpamily sy ny mpanampy mpamily. Ireto farany anefa, tsy manaiky hiasa maina fotsiny, manao izay fomba rehetra … ka mizaka izany ny mpandeha. Ireo tompona fiara koa, manana ny fitarainany momba ireo fandaniana fikojakojana ny fiara sy ny taratasy. Noho ny fahalafosan’izany rehetra izany, fiara tsy ara-dalàna no betsaka miasa ka mizaka izany hatrany ny mpandeha.